Linux ကို | November 2019
တိုင်းပရိုဂရမ်မာက source code ကိုစုဆောင်းနှင့်တည်းဖြတ်မည်သည့်အတွက်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေလျှောက်လွှာ, ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Visual Studio က Code ကို - ကိုအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်ဦးက Linux kernel မှကို Windows နှင့် operating system မြားနှစ်ဦးစလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ရည်ညွှန်းအယ်ဒီတာ Installing အသုံးပြုသူတစ်ဦးအထူးသဖြင့်လူတန်းစားများအတွက်အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ရလိမ့်မည်တစ်ခုချင်းစီ၏ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
လူကြိုက်များ Linux ကိုဖြန့်ဝေ
သာ Linux kernel ပေါ်မှာအခြေခံပြီးလည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရလိုသူတစ်ဦးကအသုံးပြုသူအလွယ်တကူဖြစ်နိုင်သမျှဖြန့်ဝေ၏အကွာအဝေးအတွင်းပျောက်ဆုံးသွားရနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း developer များစေ့စေ့ထားပြီးလူသိများ OS ကို၏ရာထူး join ဒီတော့မိမိတို့ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်သည် open source ဖြစ်ပြီး core ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်လူကြိုက်အများဆုံးသူတွေကိုဆှေးနှေးပါမညျ။
ကွဲပြားခြားနားသောကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်အတူတူဖိုင်တွေကွဲပြားခြားနားသော Operating System ကိုအပြေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိလျှင်, Samba အစီအစဉ်ကိုသင်ကူညီရန်။ ဒါပေမယ့် shared ဖိုလ်ဒါဒါ, လွယ်ကူ, ပျမ်းမျှအသုံးပြုသူများအတွက်, ဒီတာဝန်မဟုတ်ဘဲမဖြစ်နိုင်မဟုတ် customize ။ ဤဆောင်းပါးသည် Ubuntu မှာဆမ်ဘာကို configure ဖို့ဘယ်လိုဖော်ပြသည်။
Ubuntu မှာ installation Manager ကိုအသုံးပြုခြင်း
Ubuntu ရဲ့ operating system ကိုအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းဂန္ဂရပ်ဖစ်ဖြေရှင်းချက်မှတဆင့် install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ပညတ်တော်တို့ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်အား "Terminal နှင့်" မှတဆင့်အစီအစဉ်နှင့်အပိုဆောင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုမသာ - "။ လျှောက်လွှာ Manager ကို" ဒီ tool က console ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ဖူးဘူးသူတို့သည်အထူးသဖြင့်အချို့သောအသုံးပြုသူများအတွက်အဆင်ပြေပုံရသည်နှင့်နားမလည်စာသားကိုဤအစုံ၏ရှိသမျှနှင့်အတူအခက်အခဲရှိပါတယ်။
Ubuntu ကိုအပေါ် PostgreSQL Installing
PostgreSQL - ကို Windows နှင့် Linux အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အကောင်အထည်ဖော်ကွဲပြားခြားနားသောဒေတာဘေ့စစီမံခန့်ခွဲမှု၏တစ်ဦးအခမဲ့စနစ်, ။ ဒီ tool, ဒေတာအမျိုးအစားများကြီးမားတဲ့အတော်များများကိုပံ့ပိုး built-in scripting language ရှိပါတယ်နှင့်ဂန္ထဝင်ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားများအသုံးပြုမှုထောက်ခံပါတယ်။ Ubuntu ကို PostgreSQL ခုနှစ်တွင်စမ်းသပ်နှင့်စားပွဲအတွက်တာဝန်ရှိသူတဦးကသို့မဟုတ်ထုံးစံသိုလှောင်မှုကို အသုံးပြု. ထိုနောက်မှကြိုတင်အလုပ်ထွက်သယ်ဆောင်သည် "Terminal နှင့်" မှတဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
Ubuntu မှာ TAR.GZ format နဲ့ဖိုင်တွေ Installing
ကျနော်တို့က Linux ကိုဖိုင်တွဲ၏အရွယ်အစားကိုသင်ယူ
အဖြစ်တာသတင်းအချက်အလက်စနစ်အတွက် သိ. အသုံးပြုသူကအလွယ်တကူသူမ၏အလုပ်အားလုံးကိုအသေးစိတ်ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အရေးကြီးသော Linux ထဲရှိဖိုင်တွဲများ၏အရွယ်အစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များ၏အသိပညာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးသင်ဒေတာသုံးစွဲဖို့ရဖို့ရာလမ်းဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: Linux ကိုအခြေခံပြီးအသုံးပြုသူရဲ့ operating system မြား action ကိုအများစုသူတို့အများအပြားနည်းလမ်းဖြေရှင်းကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဖိုင်တွဲ၏အရွယ်အစားအဆုံးအဖြတ်များအတွက် Linux ကိုဖြန့်ဖြူးမှုနည်းလမ်းများ၏ဗားရှင်းကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို။
အဆိုပါ Linux ကိုဖြန့်ဖြူး၏ဗားရှင်း Check
ဘယ် operating system အတွက်၎င်း၏ဗားရှင်းကိုသိခွင့်ပြုပါအထူး tools များသို့မဟုတ်နည်းစနစ်ရှိပါသည်။ အဘယ်သူမျှမခြွင်းချက်များနှင့်ဖြန့်ဝေ Linux ကိုအခြေခံထားတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်တော်ကို Linux တစ်ခုဗားရှင်းကိုရှာဖွေဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: Linux ကို Linux ကိုဗားရှင်းကိုလေ့လာပါက Windows 10 အတွက် OS ဗားရှင်းစစ်ဆေးလုပ်နည်း - ကကွဲပြားခြားနားတဲ့ဖြန့်ဝေ၏အခြေခံပေါ်မှာဖွံ့ဖြိုးသောရုံ kernel ကို, ပါပဲ။
Linux ကိုဂျာဗား JRE / JDK ကို install လုပ်ခြင်း
ဂျာဗားအစိတ်အပိုင်းများဒါနီးပါးတိုင်းကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူပလက်ဖောင်း install လုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရင်ဆိုင်နေရ, ကွဲပြားခြားနားသော application များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များအမျိုးမျိုးကို run ဖို့လိုအပ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, task ကို၏ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မူအရကွဲပြားပေမယ့် Linux ကိုအမြဲတမ်းအကြောင်းကိုအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် distributions, ကြှနျုပျတို့ကိုဘယ်လိုမှာ Ubuntu ထဲတွင် Java ကို installation ကိုသင်ပြောပြချင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကို Linux system သတင်းအချက်အလက်အပေါ်ကိုကြည့်ရှုခြင်း
အားလုံးအသုံးပြုသူများသည်ဒါ OS ကိုစနစ်သတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုရန်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရပါမည်, နှလုံးရောဂါဖြင့်သင့်ကွန်ပျူတာ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုမှတ်မိအဖြစ်အခြား system component လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ Linux ကိုဘာသာစကားအပေါ်ဖွံ့ဖြိုးပလက်ဖောင်းလွန်း, ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများရှိသည်။ နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ရေပန်းစား Ubuntu ကိုလည်ပတ်မှုစနစ်၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုယူပြီး, သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှု၏ရရှိနိုင်နည်းလမ်းများအကြောင်းကိုတတ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသလောက်ပြောပြရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
Ubuntu ကိုများအတွက် file manager
သင့်လျော်သောမန်နေဂျာမှတဆင့် Ubuntu ကို operating system ကိုအတွင်းရှိဖိုင်များကိုနှင့်အလုပ်လုပ်။ linux kernel ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးအားလုံးဖြန့်ဝေ, အသုံးပြုသူပြင်းပြင်းထန်ထန်ကွဲပြားခြားနားသော shell ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲအားဖြင့် operating system ကို၏အသွင်အပြင်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာတတ်နိုင်သမျှအဆင်ပြေအရာဝတ္ထုတွေနဲ့အပြန်အလှန်လုပ်ပိုင်ခွင့် option ကိုရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
Linux ထဲရှိဖွင့်နေသည် TAR.GZ format နဲ့ဖိုင်တွေ
အဆိုပါ Gzip utility ကိုသုံးပြီးပုံမှန် archive ကို compressed - Linux ထဲရှိဒေတာဖိုင်စနစ်များနျ Standard အမျိုးအစား TAR.GZ စဉ်းစားသည်။ ဤအ directory များတွင်မကြာခဏဖိုလ်ဒါကိုသင် devices များအကြားအဆင်ပြေပြောင်းရွှေ့စေရန်ခွင့်ပြုအရာဝတ္ထု၏အစီအစဉ်များနှင့်စာရင်းအမျိုးမျိုးမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဖိုင်၏ဤအမျိုးအစားသင်ရုံ built-in utility ကိုစံ "terminal ကို" သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်လည်းအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ် Unpacks ။
Linux ကို directory များဖယ်ရှားခြင်း
အချည်းနှီးသောနှင့် Non-ဗလာ directory များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကများသောအားဖြင့် Linux kernel ပေါ်မှာအခြေပြုတဲ့ operating systems ထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်။ သူတို့ထဲကတချို့က drive ပေါ်တွင်နေရာလွတ်သိသိသာသာငွေပမာဏကို ယူ. , မကြာခဏမလိုအပ်သော။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာကသူတို့ကိုပယ်ဖျက်ဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သန့်ရှင်းရေးပုံစံများအများအပြားအချို့သောအခြေအနေများတွင်သက်ဆိုင်သောတစ်ခုချင်းစီသည်အရာ၏, ရှိပါတယ်။
Ubuntu မှာ Yandex.Disk Installing
Operating system, Ubuntu ကိုအသုံးပြုသူများကသင့်ကွန်ပျူတာကိုမိုဃ်းတိမ်ကိုဝန်ဆောင်မှု Yandex.Disk အပေါ် install လုပ်နိုင်စွမ်းအတွက်လက်မှတ်ထိုးသို့မဟုတ်အထဲတွင်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနှင့်ဖိုင်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်မပြဿနာရှိသည်။ အဆိုပါ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီးအဆိုပါဂန္ console ကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အဆင်ပြေဘို့ခြေလှမ်းများသို့ခွဲဝေ, အသေးစိတ်အတွက်တတ်နိုင်သမျှလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပန်းချီဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
Installation လမ်းညွှန် Linux Mint
အဆိုပါ Operating System (OS) Installing - ဤကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုတစ်မျှမျှတတနက်ရှိုင်းသောအသိပညာလိုအပ်သည်ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှင်အများကြီးပြီးသားပြီးတော့ Linux Mint ခက်, သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Windows ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုထွက်နေသေးတယ်ပါပြီ။ ဤဆောင်းပါးသည် Linux kernel ပေါ်မှာအခြေခံပြီးလူကြိုက်များ operating system ကိုစဉ်အတွင်းပေါ်ပေါက်တစ်ခုသာမန်အသုံးပြုသူအပေါငျးတို့သတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြဖို့ရည်ရွယ်သည်။
အဟောင်းကိုကွန်ပျူတာများများအတွက် Linux ကိုဖြန့်ဖြူးရွေးချယ်ခြင်း
အခုတော့အားလုံးမဟုတ်အသုံးပြုသူများသည်များစွာသောလူနေဆဲပြဿနာသည့် နေ့မှစ. ပြီးသားထက်ပိုငါးနှစ်ဖြစ်သောအဟောင်းမော်ဒယ်ကိုသုံးကောင်းသောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူတစ်ဦးကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုဝယ်ယူရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ခေတ်မမီတော့ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်မကြာခဏပြဿနာများအမျိုးမျိုးရှိသည့်အခါ၏သင်တန်း, files တွေကို RAM ကိုပင်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်ဖို့မလုံလောကျတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
Installation လမ်းညွှန် Kali Linux ကို
Kali Linux - နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာမယ့်ဖြန့်ဖြူး။ က install လုပ်လိုသောသူသည်အသုံးပြုသူများ၏အမြင်တွင်သူက ပို. ပို. ဖြစ်လာပေမယ့်လူတိုင်းမကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိ၏။ ဤဆောင်းပါးသည်တစ်ဦးကို PC ပေါ်မှာ Kali Linux install လုပ်ဖို့ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်ခြေလှမ်းထွက်ထားမည်။ operating system ကိုတပ်ဆင်ခြင်း, လိုအပ်သော flash drive ကို4GB အထိနှင့်ပိုပြီးလုပ်နိုင်ရန်အတွက် Kali Linux ကို Install လုပ်ပါ။
ကွဲပြားခြားနားသော Linux ကိုဖြန့်ဝေ၏ System ကိုလိုအပ်ချက်များကို
Linux ကို - ဟာ Linux operating system ကို kernel ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးသော Open source operating စနစ်များအကြံအဖန်တွေချည်းမိသားစုအမည်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်အပေါ်အခြေခံပြီးဖြန့်ဝေ, အတော်လေးကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ကိုရှိပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးစံကိရိယာအစုံ, ပရိုဂရမ်များနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်တီထွင်မှုများပါဝင်သည်လေ့ရှိပါတယ်။ ကြောင့်အသီးအသီးစည်းဝေးပွဲစနစ်လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားသော desktop ပေါ်မှာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဖြည့်စွက်၏အသုံးပြုမှုကိုအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထို့ကြောင့်သူတို့၏ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အတွက်လိုအပ်ချက်ရှိသေး၏။
Linux ပေါ်မှာဥပမာ tcpdump
သငျသညျကို Linux ပေါ်တွင်ကွန်ယက်ကို packets တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသို့မဟုတ် sniff ဖို့လိုအပ်ပါက, ဒီ command-line utility ကို tcpdump သုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပြဿနာတစ်ခုအတွက်ပေါ်ပေါက်မဟုတ်ဘဲ၎င်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုရှုပ်ထွေး။ ပျမ်းမျှအသုံးပြုသူမသက်မသာယင်း utility ကိုအတူလုပ်ကိုင်ကြောင်းထင်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကသာပထမတစ်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌သငျသညျအဲဒါကိုဘယ်လိုသုံး, ဖြစ်သည့် syntax, အ tcpdump ဆောက်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကြလိမ့်မည်, စသည်၎င်း၏အသုံးပြုမှုများပြားနမူနာဖြစ်လိမ့်မည်။
Ubuntu မှာထည့်သွင်း packages များစာရင်းတစ်ခု View
အားလုံး utilities, စာကြည့်တိုက်, နှင့် Linux အပေါ်အခြေခံသည်အခြား operating systems packages များထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်။ သငျသညျကို formats အမျိုးမျိုးနဲ့အတွက် Internet မှတစ်ဦးသည် directory ကို download လုပ်ပါ, အဲဒီနောက်ဒေသခံ store မှာထည့်ပါ။ တခါတရံမှာသင်တို့ရှိသမျှသည်ပစ္စုပ္ပန်အစီအစဉ်များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများများစာရင်းကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။